Akụkọ - Ọtụtụ okwu chọrọ nlebara anya na ntinye nke gaskets
The gasket bụ static akara akụkụ na dozie "na-agba ọsọ, emit, dripping, na-ehi ehi". Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ akara akara, dị ka ụdị akara akara ndị a si dị, gasketị dị larịị, gaselik elliptical, gaskets gas, gaskets cone, gaskets mmiri mmiri, O-yiri mgbaaka, na ụdị gask na-emechi onwe ha dị iche iche pụtara. A ga-arụzi ihe nrụzi nke gasket ahụ mgbe njikọ njikọ flange ma ọ bụ usoro njikọ njikọta, ihe ịrụ ụka adịghị ya na akụrụngwa akara na gasket na-enyocha, akụkụ akụkụ ndị ọzọ ahụ ka dịkwa.
1. Tupu ịwụnye gasket, tinye akwa ntụpọ graphite ma ọ bụ ntụpọ graphite gwakọtara mmanụ (ma ọ bụ mmiri) n'elu akara akara, gasket, eri na bolt na nut rotating akụkụ. Na gasket na graphite kwesịrị ịdị ọcha.
2. A ghaghị itinye gasket ahụ n'elu ebe a na-emechi emechi ka ọ bụrụ etiti, ziri ezi, ka ọ ghara ịda mbà, ka ọ ghara ịgbatị n'ime oghere valvụ ma ọ bụ zuru ike na ubu. Oghere dị n'ime nke gasket kwesịrị ịdị ukwuu karịa oghere dị n'ime nke akara akara ahụ, na mpụta nke mpụta kwesịrị ịdị ntakịrị karịa nke mpekere mpụta nke akara akara ahụ, iji hụ na a na-eme ka gasetị mechie.
3. Naanị otu gasket ka a ga-etinye, enyeghịkwa ya ịwụnye mpempe abụọ ma ọ bụ karịa n'etiti etiti akàrà iji wepụ enweghị oghere dị n'etiti oghere abụọ ahụ.
4. Okpu oval kwesiri ikpuchi ka ihe nkpuchi nke ime na nke di n'ime ha metuta ya, na nkpuru ya nke nkpuchi agha agaghi adi na nkpoji nke uzo.
5. Maka ntinye nke O-yiri mgbaaka, ma e wezụga na mgbanaka na uzo kwesịrị iru ihe achọrọ, ọnụego mkpakọ kwesịrị ekwesị. Ngwongwo nke ọla na-acha uhie uhie bụ 10% na 40%. Mkpakọ deformation ọnụego nke roba O-yiri mgbaaka bụ cylindrical. Akara static dị na akụkụ elu bụ 13% -20%; na static akara n'elu bụ 15% -25%. Maka nrụgide dị elu dị n'ime, nrụrụ mkpakọ kwesịrị ịdị elu mgbe ị na-eji agụụ. N'okpuru nkwado nke ijide akara akara, obere mkpirisi mkpakọ mkpirisi, nke ka mma, nke nwere ike ịgbatị ndụ O-ring.
6. valvụ ahụ kwesịrị ịnọ n'ọnọdụ oghe tupu etinye ya na mkpuchi ahụ, ka ọ ghara imetụta nrụnye ahụ ma mebie valvụ ahụ. Mgbe ị na-emechi mkpuchi ahụ, dozie ọnọdụ ahụ, ma kpọtụrụla gasketị site na ịpị ma ọ bụ dọpụta iji zere nchụpụ na ọkọ nke gasket. Mgbe ị na-edozi ọnọdụ mkpuchi, ịkwesịrị ibuli mkpuchi ahụ nwayọ, wee jiri nwayọ dozie ya.
7. Ntinye nke ihe eji eme ihe ma obu nke nkpuchi kwesiri ka o buru na gaskets di na uzo di ala (nkpuchi gas maka njikọta njikọta ekwesighi iji nkedo uzo ma oburu na enwere uzo uzo). The ịghasa tightening kwesịrị ịmụta a symmetrical, ọzọ, na ọbụna ọrụ usoro, na bolts ga-n'ụzọ zuru ezu buckled, mma n'anya na bụghị rụrụ.
8. Tupu gasket etinyere, nrụgide, okpomọkụ, Njirimara nke ọkara, na àgwà gasket ihe e ji mara ga-ghọtara nke ọma iji chọpụta tupu tightening ike. Ekwesiri ime ka ike sie ike dị ka o kwere mee n'okpuru ọnọdụ na ule nrụgide anaghị agbapụta (ike dị ukwuu na-eme ka ihe sie ike ga-emebi gasket ma mee ka gasket ghara ịda mbà).
9. Mgbe emechara gasket, ekwesiri ijide n'aka na enwere oghere ga-eme ka ihe jikọọ ya, yabụ na enwere ohere maka ịkwanye mgbe gasị ahụ na-ehi.
10. Mgbe na-arụ ọrụ na elu okpomọkụ, bolts ga-enweta elu okpomọkụ creep, nrụgide ezumike, na ụba deformation, na-eduga na leakage na gasket na-achọ kwes tightening. N'ụzọ megidere nke ahụ, n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị ala, akụ ga-ada mbà ma dị mkpa ka oyi jupụta. Hot tightening bụ pressurization, oyi loosening bụ mgbali enyemaka, na-ekpo ọkụ tightening na oyi na-atụ loosening kwesịrị rụrụ mgbe ịnọgide na-arụ ọrụ okpomọkụ 24 awa.
11. Mgbe ejiri gasket mmiri mee ihe maka ebe a na-emechi ihe, a ga-ehicha ma ọ bụ mechie elu ahụ. Ebe a na-emechi emechi dị larịị kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe mgbe egweri, na nrapado ya kwesịrị itinye ya n'ọrụ (nrapado ahụ kwesịrị ịdị na ọnọdụ ọrụ), na ikuku kwesịrị ịhapụ ka o kwere mee. The nrapado oyi akwa bụ n'ozuzu 0.1 ~ 0.2mm. Ihe nkedo a na elu ya bu otu. A ghaghị itinye mkpuchi abụọ nke kọntaktị ahụ. Mgbe ị na-achọgharị, ọ kwesịrị ịnọ n'ọnọdụ kwụ ọtọ iji kwado nkwanye ikuku. Ntuchi ahụ ekwesịghị ịba ụba iji zere ịwụfu na ịcha ntụpọ ndị ọzọ.
12. Mgbe ị na-eji teepu ihe nkiri PTFE maka akara akara, mmalite nke ihe nkiri a kwesịrị ịgbatị mkpa ma jikọta ya na eri eri; mgbe ahụ, a ga-ewepụ teepu ngafe na mmalite iji mee ka ihe nkiri ahụ na-arapara na eri n'ime ụdị osisi wedge. Dabere na ọdịiche eri, ọ na - ejikarị ọnya 1 ruo 3 ugboro. Ntụgharị ntụgharị ga-agbaso usoro ịghasa, na njedebe njedebe kwesịrị ịbụ ihe dabara na mmalite; jiri nwayọ dọpụta ihe nkiri ahụ na pịrị ọnụ, nke mere na oke ihe nkiri ahụ na-emerụ emerụ. Tupu ịgbanye, pịa ihe nkiri na njedebe nke eri ka ihe nkiri ahụ wee nwee ike ịbanye n'ime eriri dị n'ime ya na ịghasa; theghasa kwesịrị ịdị ngwa ngwa ma ike kwesịrị ịdị ọbụna; emegharịkwala ọzọ mgbe ị na-emechi, ma zere ntụgharị, ma ọ bụghị na ọ ga-adị mfe ịpịpụ.